Ọtụtụ n'ime nkọwa nke Meizu 16s Pro agbapụla Gam akporosis
Ọtụtụ n'ime nkọwa nke Meizu 16s Pro agbapụla
A obosara akwụkwọ nke smartphones abụghị kpọmkwem ihe Meizu nwere. Agbanyeghị, a hụghị onye ọrụ China a dịka otu n'ime ụdị kachasị mma anyị nwere ike ịchọta n'ahịa, dịka ekwentị mkpanaaka. N'ezie, njedebe ya apụtawo ọtụtụ afọ dị ka ngwaọrụ dị oke mma, ma na ngalaba mara mma - okwu nke na-emeziwanye kemgbe ọtụtụ afọ - na nkọwapụta teknụzụ.
Usoro Meizu 16 bụ otu n'ime ihe ịtụnanya kachasị nke ụlọ ọrụ weputara. Agbanyeghị, ngwa ngwa nke ụlọ ọrụ dịka Samsung, Huawei, Xiaomi na ndị ọzọ ejirila ya kpuchie ya. Agbanyeghị, ọ na-ezube ịnya ụgbọ elu ọhụrụ iji nye ndị na-asọmpi ume ume ya, nke a ọ na-ezube ime na nke na-esote Meizu 16s Pro, nke elu-elu Anyị na-ekwu okwu ugbu a maka na akwụkwọ edere ọtụtụ njirimara ya na nkọwapụta teknụzụ ya.
Ihuenyo nke akwụkwọ ahụ edepụtara n'okpuru ebe a sitere na Weibo microblogging portal. Nke a, karịa akwụkwọ, bụ ndepụta na nkọwa nke na Meizu 16s Pro na-abịa na Snapdragon 855 Plus, ikpo okwu Ịgba Cha Cha ebularịrịrịrị maka ngwaọrụ a n'oge gara aga na nke ahụ kwenyere na ihe ngosi na-egosi na ọ ga-abụ njedebe elebara anya na egwuregwu.
Meizu 16s Pro leaked oru nkọwa
Ndepụta ahụ na - ekpughe - ma ọ bụ na - akwado - kama nke ahụ ga-abịa na 6 na 8 GB nke RAM. Maka data a, anyị anaghị atụ anya ka ụdị dị iche iche ROM dị ala karịa 128 GB na 256 GB, n'otu n'otu. Agbanyeghị, enwere ike ịnwe ihe atụ nwere 12 GB nke RAM.
A na-atụ anya na ọkọlọtọ ga-amalite na Ofufe 8, ma nkwụsị ahụ na-egosi na ọ ga-eji Flyme 7.8, yana OneMind 3.5 engine maka ọrụ Artificial Intelligence na ndị ọzọ. Anyị makwaara ụbọchị nnabata nke Meizu 16s Pro, nke bụ August 28, mana nke a ọ bụ ihe ekwuputara ụbọchị ole na ole gara aga.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Ọtụtụ n'ime nkọwa nke Meizu 16s Pro agbapụla
Facebook egela ntị na audio nke ị na-eziga na Messenger